नयाँ वर्षको शुभकामना 2015 – दोकान मा के?
जनवरी 1, 2015 द्वारा Ofer3प्रतिकृयाहरु
बस विशेषताहरु आउँदो वर्षको लागि योजना कुराबारे छिटो writeup गर्न चाहन्थे:
ब्याकइन्ड स्ट्रिङ सम्पादक – यो सुविधा बारे मा छ 80% अहिले पूरा, यो तपाईं डेटाबेस सम्मिलित तार देख्न र ती केही कार्यहरू गर्न अनुमति दिन्छ. यस्तो एक तस्वीर हुनेछ एक अनुवादक देखि सबै अनुवाद हटाउने रूपमा अब धेरै गाह्रो कुरा. यो सुविधा केही हप्ता मा रिहाई को लागि आशा छ.
अपलोड निर्देशिका मा विजेट लागि समर्थन – कस्टम विजेट लेखकहरूले छ गनगन गरिएको (र ठीक त) तथ्य बारेमा उन्नयन को विजेट एक पुनर्स्थापित सेना. आधारभूत विचार केही फाइलहरू त्यहाँ रहन अनुमति हुन र परेशानी जोगिन हुनेछ. यो पनि हामीलाई प्लगइन फाइल आकार inflating बिना विजेट र अधिक विकल्प दिन अनुमति हुनेछ जो एक डाउनलोड विजेट निर्देशिका को विकल्प खुला सक्छ.
दृश्यपटल स्ट्रिङ सम्पादक – यो पेज मा तार केही इन्टरफेस सिर्जना गर्नेछ, भइरहेको छैन कि, जबकि “wysiwyg” केही राम्रो कार्यप्रवाह अनुमति दिन्छ, मुख्य मेटा तार र अन्य लुकेका तार सम्पादन सम्बन्ध संग, केही भाग्य संग, ajax अनुवाद पनि यस उन्नयन पछि सम्पादन योग्य हुनेछ. यो एक आउन केही महिना हुनेछ.
अंक प्रणाली समर्थन – यो सुविधा स्वचालित अरबी र हिन्दी सिस्टम युरोपेली अंक प्रणाली देखि संख्या अनुवाद गर्नेछ (र शायद उप-बाकसबाट). एक महत्वपूर्ण सुविधा तर एक राम्रो सुविधा तपाईं नजिकै एक पदवर्णकअसफलभयो चाँडै आउँदै छैन.
संविधान मेनु एकीकरण – वास्तवमा त्यसै धेरै गहिरो छैन, हुन सक्छ, छैन, हुन सक्छ.
कुनै टिप्पणी र विचार तल स्वागत गरिनेछ, तिनीहरूले अर्थमा बनाउन भने हामी हाम्रो आर्जेको तिनीहरूलाई जोड्छु. तपाईं साँच्चै सुविधा प्रवर्द्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं कोडन प्रायोजक सक्छ, रूप ले संपर्क.
जनवरी 14, 2015 मा 1:35 को मा
आफ्नो हार्ड काम र आफ्नो महान् प्लगइन लागि तपाईं धेरै धन्यवाद!
म यो नयाँ तपाईं एक ठूलो उत्पादकत्व इच्छा 2015 वर्ष!
अनि म सबै भन्दा मलाई सहमत हुनेछ लाग्छ, would like to see oftener updates 😉
धन्यवाद फेरि, र यो भयानक सुविधाहरू लागि प्रतीक्षा!
फेब्रुअरी 18, 2015 मा 4:36 को मा
ठूलो काम रहनुहोस्, मानिस! म Transposh फेला र तथापि म सक्छन् समर्थन जारी हुनेछ त्यसैले खुसी. ब्रावो!
Steen Grønfeldt भन्छन्
मार्च 6, 2015 मा 4:58 साँझ
यो म आफ्नो प्लगइन देख्न पहिलो पटक हो – म यर्मिया दिन पर्छ, यो एकदम cunningly छ! म धेरै वर्ष को लागि एक अनुवादक रूपमा काम गरेका छन्, र यहाँ म संग मा काम गर्न छ – पृष्ठ को डैनीश अनुवाद सुधार गरेर मेरो योगदान दिन प्रयास गर्नेछौं!